Kumanaan ka Qaxay Wisil | KEYDMEDIA ONLINE
Kumanaan ka Qaxay Wisil
Hay'adda Qaramada Midoobay uqaabilsan bani'aadanimada ayaa ka hadashay weerarkii kooxda Al-Shabaab ku qaadeen degaanka Wisil ee gobolka Mudug.
WISIL, Soomaaliya - Hey’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bani’aadannimada ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in dagaalkii ka dhacay shalay degaanka Wisil ee u dhaxeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo isgarabsanaya iyo kuwa dagaalyahanada uruka Al-Shabaab uu geystay khasaaro isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed.
Hay'addu waxay sheegtay in kumanaan dad gaaraya ay ku barakaceen dagaalkii ka dhacay degaanka Wisil ee Gobolka Mudug, inkastoo dagaalku uu billowday salaaddii subax markii la tukaday uuna soo gabagaboobay saacado kaddib, iyadoo kooxihii weerarka soo qaaday ay ku baxsadeen waddo ay miinooyin ku aaseen, kuwaasoo ay ku qarxiyeen gawaaridii daba socotay.
Degaanno ku dhaw halka uu weerarku ka dhacay ayey gaareen qoysas farabadan oo ku barakacay halkaas, degaannada xeryo Dhagaxleey, Hobyo iyo Gaalkacyo ayaa la sheegay in ay gaareen qoysas farabadan oo halkaasi isaga cararay, iyagoo ka cabsi qaba weerar kale oo gaadmo ah kaasoo kaga yimaada dagaalyahannada Al-Shabaab oo maalmahan laba jibaaray weerarrada ay ku hayaan qeybo kamida degaannada hoostaga Galmudug.
Degaanka Wisil waxaa shalay isku fara-saaray Ciidanka dowladda Soomaaliya iyo kuwa kuwa Galmudug oo iskaashanaya iyo dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kadib markii Al-Shabaab ay degaankaas ku qaadeen weerar ku billowday qarax.
Inkabadan soddon ruux oo isugu jira dad shacab ah iyo ciidan ayaa goobta ku geeriyooday, iyadoo dhaawacyadana ay intaa ku dhawaayeen, waxaana loola cararay dadkii ku dhaawacmay Isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo, iyadoo dadkii ay xaaladdoodu darneyd loo qaaday magaalada Muqdisho, si loogu dabiibo xaaladdooda caafimaad oo aad u liidatay.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay galinkii dambe usoo dirtay dhaawacyadii halista ahaa ee ku sugnaa magaalada Gaalkacyo, waxaana isla habeenimadii la geeyay magaalada Muqdisho.